Owagqama kuma-Idols ukhuza iBuya ngengoma | IOL Isolezwe
Owagqama kuma-Idols ukhuza iBuya ngengoma
Isolezwe / 19 April 2017, 12:00pm / FANELESIBONGE BENGU
UMCULI owagqama kuma-Idols SA ngo-2014 uBongi Silinda usekhiphe ingoma yakhe yesibili ethi Buya apike kuyo iSoul Kulture
USAFUNA ukuzwa amanzi ngobhoko umculi owalala isibili kuma-Idols SA ngo-2014.
UBongi (27) waseMpumalanga wahlulwa nguVincent Bones kowamanqamu kulo mncintiswano.
Kulezi zinsuku uphansi phezulu emisakazweni ehlukene uphusha ingoma yakhe entsha ethi Buya apike kuyo iqembu iSoul Kulture.
Le ngoma uyenze nomdidiyeli ohlonishwayo uMojalefa “Mjakes” Thebe futhi ikhishwe ngaphansi kwenkampani yakhe iNu Sound Factory.
“Okwamanje ngisayikhiphe emsakazweni angikakayidayisi. Angifuni ukudayisela abantu into abangayazi. Kungcono bayizwe kuqala ngaphambi kokuthi bayithenge. Ngicabanga ukuthi ku-iTunes izophuma emasontweni amabili ezayo,” kusho uBongi.
Uthe ishaya ngesigqi se-Afro soul.
“Abantu bayayithanda into abahlale beyizwa, ngakho kumele ubenze bakholelwe emculweni wakho ukuze bezowuthenga. Umculo wami useqophelweni eliphezulu futhi ngikholwa wukuthi uzokwenza kahle,” kusho le ntokazi.
Ngo-2015 ukhiphe ingoma ethi Chasing My Dreams eshaya ngesigqi se-pop. Uthe ayenzanga kahle.
“Angizange ngiyiphushe ngoba ngangisahlola ukuthi hlobo luni lomculo engifuna ukulwenza. Leya ngoma yayiyi-pop kakhulu. Ngiyakwazi ngisho ukwenza umculo wokholo kodwa ngifuna ukwenza i-Afro soul. Ngigxile kubantu abathe ukukhula ngoba nami ngikhule ngilalela umculo onjalo,” kusho uBongi.
Uthe i-albhamu yakhe uzoyiqamba ngokuthi yi-27 ngenxa yokuthi kulo nyaka uhlanganisa iminyaka engu-27.